Sakafo miteraka fivontosan'ny kibonao | Sakafo Nutri
Betsaka ny olona maniry kibo fisaka amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena sy fahasalamana. fitondrana sakafo. Na izany aza, rehefa toa mandeha tsara ny zava-drehetra dia mijaly ianao indraindray mamaivay izay manafoana ny ezaka vita rehetra ary mahatonga ny pataloha hifanaraka tsara kokoa. Ny olona sasany tsy miraharaha, fa ny hafa kosa mahita fa misy vokany eo amin'ny alok'izy ireo izany.
Mazava fa mihoatra ny estetika, tokony ho fantatsika rehetra fa ity karazana mamaivay Izy io dia vokatry ny fihinana be loatra amin'ny fandevonan-kanina izay miseho rehefa mihinana sakafo izay mavesatra loatra loatra na be loatra. Ho fanampin'izany, tsy mahagaga raha miaraka amin'ireny fivontosana ireny, hafa soritr'aretina manorisory, toy ny entona tsinay, ny fehikibo ary ny fanaintainana. Izay no antony tsara hahalalana hoe inona ireo sakafo mety hiteraka an'io olana io, hialana amin'ny fihinanana azy araka izay tratra.
1 Sakafo matavy be
2 Zava-pisotro misy karbaona
3 Legioma cruciferous
4 Ny sira
5 Gliosida voadio
Sakafo matavy be
Sakafo avo be menaka izy ireo dia iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny fivontosan'ny kibony. Ankoatry ny fiakaran'ny lanjan'ny lanja dia ataon'izy ireo sarotra ny fizotran'ny fandevonan-kanina ary mampitombo ny haavon'ny kolesterola. Ohatra, paompy vavony ny fries frantsay satria misy ny starch sy ny tavy matavy.
Zava-pisotro misy karbaona
ny Zava-pisotro misy karbaona Ankafizin'ny olona maro izy ireo, noho ny fahatsapana vokariny rehefa lanina sy ny atin'ny siramamy avo lenta, izay miteraka fiankinan-doha iray. Ny gazy karbonika ao anatin'ireny zava-pisotro ireny dia miteraka soritr'aretina toy ny aretin'andoha sy ny fivontosan'ny vatana.
Misy legioma cruciferous polysaccharides, singa iray izay sarotra tokoa ny mandevona, izay manala rehefa mifandray amin'ny bakteria tsinay, ary miteraka soritr'aretina manelingelina ao amin'ny vavony toy ny entona sy belching.
Ho fanampin'izany, ny fandraisany anjara amin'ny kofehy dia miteraka a mamaivay kibo mety ho sarotra ny manasitrana. Ny tsara indrindra dia ny fihinanana legioma amin'ny fomba antonony, atambatra azy ireo amin'ny sakafo hafa izay manampy amin'ny fihenan'ny vokatra eo amin'ny vatana.
El mihinana sira be loatra Izy io dia iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny fihazonana rano ao amin'ny sela amin'ny vatana. Ny zava-misy amin'ny fampihenana ny fihinana azy dia mamela fiovana tsara amin'ny haavon'ny fahasalamana ankapobeny sy ny taova rehetra.
ny gliosida Ny voadio dia nandalo dingana iray izay nanesorana ny fibre, nanolo azy tamin'ny kaloria tsy misy ary tsy misy otrikaina. Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny lafarinina fotsy, misy amin'ny lovia iraisana toy ny pizza, mofo na fivarotana mofomamy. Raha ny marina dia misy olona tsy mahazaka an'ireny karazan-tsakafo ireny ary amin'ny ankapobeny dia misy ny mahazaka fanehoan-kevitra mahazaka vantany vao voatelina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Sakafo miteraka fivontosan'ny kibo
Arovy foana ny ketrona